သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလျှပ်စစ်ပဲမျိုးစုံသုံးပြီးမှတ်ဉာဏ်ကျဆင်း reverse - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလျှပ်စစ်ပဲမျိုးစုံသုံးပြီးမှတ်ဉာဏ်ကျဆင်း reverse” ဟန္န Devlin သိပ္ပံသတင်းထောက်ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 8th ဧပြီလအပေါ်များအတွက် 2019 15.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အိုမင်း၏ရလဒ်အဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတစ်ဦးကကျဆင်းနေယာယီလျှပ်စစ်ဦးနှောက်ဆွတဲ့အန္တရာယ်ကင်းပုံစံကို အသုံးပြု. ပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ပြီ.
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အချို့သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုသိသိသာသာကျဆင်းရှင်းပြကူညီ အသက်အရွယ်နှင့်အတူ အသစ်ကုသမှု၏အလားအလာကိုမြှင့်.
"ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများကိုမပြောင်းလဲမဟုတ်,"ရောဘတ် Reinhart ကပြောပါတယ်, ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, အလုပ်ဦးဆောင်ခဲ့သူ. "ကျနော်တို့ကသင်အများကြီးအသက်ငယ်စဉ်အခါသငျသညျရှိခဲ့သောသာလွန်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် function ကိုဆောင်ခဲ့ပြန်နိုင်တယ်။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုခေါ်သိမှတ်ခံစားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချသို့မဟုတ်တွက်ချက်မှုဖျော်ဖြေနေစဉ်ရေတိုကာလအဘို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိထားသူသောဦးနှောက်စနစ်က. မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အလုပ်များကိုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာများအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်, ဂဏန်းသင်္ချာလုပ်နေတာအသစ်တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာ.
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူကျဆင်းလူသိများသည်, ပင်စိတ်ဖောက်ပြန်မဆိုပုံစံ၏မရှိခြင်းအတွက်. ဒီကျဆင်းမှုအတွက်တစ်ခုမှာအချက်နှစ်ခုဦးနှောက်ကွန်ရက်များအကြားတစ်ဦးအဆက်ဖြုတ်ဖြစ်ထင်နေသည်, အဆိုပါ prefrontal နှင့်ယာယီဒေသများအဖြစ်လူသိများ.
လူငယ်များအတွက်, အဲဒီနှစျခုဒေသများအတွက်လျှပ်စစ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုစည်းချက်ညီညီတူညှိခံရဖို့လေ့, အရာသိပ္ပံပညာရှင်များသတင်းအချက်အလက်နှစ်ခုဦးနှောက်ဧရိယာများအကြားလဲလှယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထင်.
သို့သော်, အဟောင်းတွေကလူအတွက်လှုပ်ရှားမှုနည်းသောတင်းကျပ်စွာညှိခံရဖို့လေ့. ဤသည်ကဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်လင့်ထားသောသည့်တာဝေးပစ်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏ယိုယွင်းပျက်စီးလာ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်.
လေ့လာမှုမှာ, ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လျို့ဝှက်, 42 20-29 အသက်လူများနှင့် 42 60-76 အသက်ကလူတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန်အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်.
အဆိုပါအဟောင်းတွေအဖွဲ့စမ်းသပ်မှုအပေါ်နှေးကွေးခြင်းနှင့်တိကျမှုနည်းပါးခဲ့ကြ. အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များပြီးတော့သူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့မပြုလုပ်ရပါ 25 Non-ထိုးဖောက်ဦးနှောက်ဆွ၏မိနစ်. ဒါဟာဦးရေပြားကတဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ပဲမျိုးစုံဖြတ်သန်းအားဖြင့်၎င်း, ဦးနှောက်ထဲသို့နှစ်ခုပစ်မှတ်ကဦးနှောက်ဒေသများတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်.
အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြီးနောက်, အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်အငယ်အုပ်စုကိုကိုက်ညီတိုးတက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့ကြာရှည်ထငျရှား 50 အဆိုပါဆွပြီးနောက်မိနစ်. အတူစတင်ရန်အဆိုးဆုံးသွင်းယူခဲ့သောသူများသည်အကြီးဆုံးတိုးတက်မှုပြသ.
"ကျနော်တို့ကအခြေခံမှာအကြီးမြတ်ဆုံးလိုငွေပြမှုနှင့်အတူလူတွေအတွက်အကြီးဆုံးတိုးတက်မှုမြင်နေပါတယ်,"Reinhart ကပြောပါတယ်. "ဒါဟာတကယ်သိမြင်မှုကဦးနှောက်မမှန်ဤအမျိုးအစားများနှင့်အတူလူအတွက်လက်တွေ့အလုပ်အတွက်ကောင်းစွာနိမိတျ။ "
သို့သော်, ပါမောက္ခရောဘတ် Howard, University College London မှအသက်ကြီး Psychiatry ၏ပါမောက္ခ, အဆိုပါစာမေးပွဲများတွင်တွေ့မြင်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်တိုးတက်မှုတခုကုန်ကျစရိတ်မှာလာစေခြင်းငှါသတိပေး.
"ငါသည်ဤလက်တွေ့အကျိုးရှိသို့ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မည်ဟုမဆိုဝင်လာယူဆချက်ဆန့်ကျင်သတိထားမယ်လို့,"ဟုသူကဆိုသည်. "ဒီတွေ့ရှိချက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ပုံတူကူးယူရနျလို, သင်တန်းသားများကို၏ပိုကြီးတဲ့ဂဏန်းနှင့်ဘာသာရပ်များနှင့်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်၏ကြံ့ခိုင်မျက်စိကန်းနှင့်အတူ.
Related: မှတ်ဉာဏ်အမြင် contaminates | mo Costandi
"ဟုအဆိုပါ technique ကိုနဲ့ဆက်စပ်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေမှတ်ဉာဏ် function ကိုအတွက်မဆိုသိသာတိုးတက်မှု၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအကြိုးခံစားခှငျ့မြားကိုလညျးဦးနှောက်ဆွမဆိုအလားအလာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများများ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအကဲဖြတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသွေးဆောင်တိုးတက်မှုသိမြင် function ကိုတခြားဒေသများ၏ပိုမိုဆိုးရွားလာ၏စျေးနှုန်းမှာလာပါလိမ့်မယ်။ "
Dardo Tomasi, Bethesda အတွက်အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုမှာသိပ္ပံပညာရှင်, အလုပ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သူကိုမဟုတ်ခဲ့, ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာစိတ်ဖောက်ပြန်မှုအတွက် ... အခြားရွေးချယ်စရာကြားဝင်၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ကိုအရေးပါတဲ့တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
ဤအရလဒ်တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အလားအလာရှိကြ၏နေစဉ်, ဟုသူကပြောသည်, ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုများတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုဖို့သူတို့ဆေးခန်းလျှောက်ထားစေခြင်းငှါဘယ်လိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့.
Reinhart ယင်းချဉ်းကပ်မှုပုံစံအဟောင်းကလူအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်သိသာထင်ရှားသောလက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်. သူကလည်းဆင်းရဲသားကိုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများကုသ applications များရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia နဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအဖြစ်.
ဒေါက်တာဂျိမ်းစ် Pickett, အဆိုပါအယ်လ်ဇိုင်းမားလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသုတေသန၏ဦးခေါင်းကို, ကပြောပါတယ်: "ကျနော်တို့ကိုပျောက်ကင်းစေမနိုင်, တားဆီးသို့မဟုတ်ပင်ကကျွန်တော်ကုသမှုအတွက်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှဒေသများစူးစမ်းအရေးပါသောအဖွင့်နိုင်အောင်စိတ်ဖောက်ပြန်နှေးကွေး.
"နည်းပညာနှင့်အတူဦးနှောက်၏ circuitry ပြောင်းလဲနှင့်ဆုံးစိတ်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်သုတေသနအသစ်တစ်ခုကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Avenue ဖြစ်ပါသည်. နက်ရှိုင်းသော-ဦးနှောက်ဆွ, ပါကင်ဆန်အတွက်အသုံးပြုမယ့်ခွဲစိတ်ကုသမှု, ဒီချဉ်းကပ်မှုတစျနေ့ကစိတ်ဖောက်ပြန်ဘို့အသီးကိုသီးမည်အကြောင်းမူအရ၏အထောက်အထားဖြစ်၏။ "
← ခေါက်ဖန်သားပြင်နှင့် 5G: အဘယ်အရာကိုစမတ်ဖုန်းအတွက်လာမယ့်မယ့် 2019? ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းခမ်းနားစူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောခရီးသွားကျောက်မျက်ရတနာ →